Maxkamadda ciidanka qalabka sida oo la wareegtay nimankii ka dambeeyay dilka wasiir Cabaas Siraaji – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamadda ciidanka qalabka sida oo la wareegtay nimankii ka dambeeyay dilka wasiir Cabaas Siraaji
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa maanta la wareegtay labo ka mid ah illaalada hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Jimcaale Faarax oo ku eedeysan dilkii wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Labadaasi nin ayaa la sheegayaa inay ahaayeen kuwii rasaasta ku furay gaariga uu watay Allaha u naxariistee wasiir Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji oo xalay geeriyooday, waxaana raggaasi haatan lagu wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre ayaa amar ku bixiyay in xabsiga la dhigo labada nin ee ku eedeysan dilka wasiir Cabaas Siraaji, waxaana haatan kiiskooda la wareegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.
Mid ka mid ah illaaladii wasiirka la dilay ayaa la sheegayaa inuu haatan dhaawac yahay, halka midka kalena uu bad-baaday.
Dilka wasiir Cabaas Siraaji ayaa haatan ah mid weli lagu wareersan yahay, waxaa la isku haystaa inuu dilkiisa ahaa shil iyo in mid si ku tallo-gal ah loo dilay.
Dhinaca kale, mas’uuliyiinta ugu sareeysa dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dilka loo geystay wasiir Cabaas Siraaji, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horkeeno dadkii dilkiisa ka dambeeyay.
Allaha u naxariistee, Cabaas Siraaji ayaa ahaa wasiirkii ugu da’da yaraa ee ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana uu xilka la wareegay 3-dii bisha April ee sanadkaan, isagoona habeenkii xalay lagu dilay afaafka hore xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.